स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई प्रश्न: कोरोना संक्रमितले बेड पाउने अवस्था छ? [भिडियो वार्ता] :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई प्रश्न: कोरोना संक्रमितले बेड पाउने अवस्था छ? [भिडियो वार्ता] जेठ र असारमा संक्रमणको उच्चतम बिन्दुमा पुग्छौं भन्दा कतिपय नेताले ‘ज्योतिष नबनौं’ भने
स्वास्थ्यखबर सोमबार, वैशाख २०, २०७८, १०:१८:५९
बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण आतंकित आमनागरिकमाझ उक्त सन्देशले सन्देह सिर्जना गर्‍यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? मन्त्रालयले भनेजस्तै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नलाई बेड अभाव भइसकेको हो? कोभिडसँग जुध्ने सरकारको पनि फ्रन्टलाइन एजेन्सी स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्दैछ? स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग डिबी खड्का र कल्पना पौडेलले गरेको संवादः
चेन ब्रेक गर्न हामीले निषेधाज्ञा गर्‍यौं तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यसपल्ट किन नगरिएको ?
कहिलेकाहिँ बढी आशा देखाउँदा पनि निराशा पैदा हुन्छ कि!
म तपाईंसँग निम्बन्ध लेख्न बस्या छैन, कथाकार हैन, उपन्यास लेखिरहेको छैन। म मन्त्री हुँ, सरकारको प्रतिनिधी हुँ। जे छ त्यो भन्दैछु। यसबाट आशा जाग्छ कि निराशा जाग्छ, त्यो मेरो विषय होइन। मेरो दायित्व, सरकारको दायित्व जीवनको रक्षा गर्नु हो।
‘डेल्टा भेरिएन्ट’ फैलिँने क्रममा निरन्तरता, चीनमा थप ५५ व्यक्तिमा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि २७ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट एकै परिवारका तीनको मृत्यु, गाउँ सिल ४४ मिनेट पहिले